Massimiliano Allegri oo sheegay in xidiga xulka qaranka Paulo Dybala uu u dhaqaaqi doono Real Madrid ama Barcelona – Gool FM
Massimiliano Allegri oo sheegay in xidiga xulka qaranka Paulo Dybala uu u dhaqaaqi doono Real Madrid ama Barcelona
(Juventus) 14 Juunyo 2018. Macalinka reer Talyaani iyo kooxda Juventus Massimiliano Allegri ayaa wuxuu xaqii jiyay in xidiga xulka qaranka Argantina ee Paulo Dybala uu doonayo inuu ka dhaqaaqo kooxda Bianconeri xili ciyaareedka soo aadan.
Massimiliano Allegri ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska “Calcio Mercato” wuxuu kaga hadlay “Waxaan la hadlay Paulo Dybala kahor fasaxa, wuxuu ii xaqiijiyay inuusan ka tagi doonin kooxda Juventus kadib koobka aduunka”.
“Paulo Dybala wuxuu sii joogi doonaa Juventus xili ciyaareed kale, kadib wuxuu u dhaqaaqi doonaa midkood kooxaha Barcelona ama Real Madrid”.
“Wuxuu doonayaa inuu hormar sii sameeyo, hadii uu joogay kooxda Juventus wuxuu ku biiri doonaa midkood kooxaha Real Madrid, Barcelona ama Bayern Munich”.
"Waxaan rajeynayaa in Fernando Hierro iyo kooxdiisa farsamada ay guul la gaari doonaan Spain"… Antonio Pizzi
Jamie Vardy oo sheegay inuu ku faraxsan yahay jawiga cajiibka ah ee xerada tababarka xulka England